साबधान ! तनहुँमा भेटिए यस्ता ड र लाग्दो रोग भएका २०१ जना बिरामी – Annapurna Post News
April 25, 2022 sujaLeaveaComment on साबधान ! तनहुँमा भेटिए यस्ता ड र लाग्दो रोग भएका २०१ जना बिरामी
तनहुँ- तनहुँमा क्षयरोगका २०१ बिरामी पहिचान भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म जिल्लामा क्षयरोगका २०१ बिरामी पहिचान भएका हुन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार त्यसमध्ये नसर्ने खालका १३० रहेका छन् । जिल्लामा क्षयरोगको ८२।१ प्रतिशत उपचार सफल भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । छ महिना नियमित औषधि सेवन गरे क्षयरोग निको हुन्छ ।